Ileta The English Premier League Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Ileta The English Premier League Site Train
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/12/2020)
Maka njem onye-eme inwe mmasị sports, touring England maka Premier League mkpá ọkụ na-a pụrụ iche ahụmahụ. Mgbe a ole na ole ìgwè ebili ka na-ada site na otu onye ọ bụla oge, nke pụtara na ọ bụ mgbe kpọmkwem otu ugboro abụọ na a n'usoro, ọ bụ mgbe niile eziokwu na ọ na-agbasa nile England na Wales. Nke a n'ezie na-eme ka Premier League a ụdị nke eke njegasi a onye nwere ike chọrọ inyocha obodo. Ọ na-agụnye ihe ndị kasị a ma ama n'obodo, ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị omiiko ngosipụta nke obodo omenala, na ụfọdụ n'ezie ámá egwuregwu dị egwu. Plus, na agafe site na otu obodo ọzọ nwere ike inye gị mara mma mata otú nke ama British obodo!
N'eziokwu ụdị tour nwere ike e mere na iche iche nke ụzọ dị iche iche, nyere na Premier League mejupụtara 20 ìgwè kwa oge. Nke a bụ ihe nke a sample ezie, nke dị iche iche ụzọ gasị ị pụrụ na obodo, stadiums, na ìgwè ị pụrụ ịhụ.
London ka Brighton
Ọ bụ ihe kacha mma na-amalite nke a ụdị njem London ihe abụọ mere. First, ọ bụ ebe ị na-na na-yikarịrị ka ofufe n'ime na agbanyeghị. na nke abụọ, ọ bụ n'ụlọ ọtụtụ Premier League klọb, nke pụtara na ọ bụ ebe mara mma na-amalite na ọgwụgwụ njem gị maka a mara mma loop gburugburu Britain. I nwere ike na-amalite na ọtụtụ klọb, ma m akwado ịhụ Chelsea na Stamford Bridge. The ebe mgbakọ bụ magburu onwe, na otu ogo nke Premier League stadiums ehota 140 afọ nke akụkọ ihe mere eme na-agwa dị ka ihe na-edebe ya n'etiti ndị kasị mma. Na otu bụ fọrọ nke nta mgbe mpi (na kwesịrị na 2018 dị ka nke ọma).
si London, onye ezi uche ụzọ na-amalite na dị na ndịda n'ebe Brighton. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na-agba ịnyịnya na-agwụ na otu nke England ji mma beach obodo na Brighton. London Victoria ojii, London Bridge Station, na London St. Pancras ebe niile nwere kpọmkwem agafe na-ewere Olee ihe enyemaka otu awa.
Brighton na Cardiff
Ozugbo Brighton, i nwere ike gbatịa gị ụkwụ site n'ije ije gburugburu ụfọdụ n'ezie pụrụ iche ebe. Obodo pie bụ ma ama (na ukwuu ụtọ ekele ya mma-dị ka ikuku), na e nwere ndị a ole na ole ochie na ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na distrikti uru ịgagharị. Football-maara ihe, ị ga-gawa Falmer Stadium, nke bụ otu n'ime ndị ọhụrụ na otu. Brighton & Hove Albion bụghị a powerhouse na n'elu elu nke English football, ma ya Fans nwere ike ịbụ omiiko na a egwuregwu bụ oké ụzọ na-eji otu ehihie ma ọ bụ mgbede na a na-ekpo ọkụ beach obodo dị na n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Rotterdam gaa London Eurostar Train
Antwerp na London Eurostar train
Mgbe Brighton, ị ga-mkpa ịmalite circling elu n'ebe ọdịda anyanwụ, na e ebe ole na ole nhọrọ. Ị nwere ike njem Bournemouth ma ọ bụ Southampton na Southwest, dị ka ọmụmaatụ, dị ka ma obodo nwere Premier League ìgwè. Ma n'ihi na football bụ mma elu ugwu (na otú a ka umu-obodo, achọghị ịzụ), ọ kacha mma ka na-amalite na-akpụ akpụ n'ebe ugwu nakwa. Ya mere m akwado aga Cardiff, Wales. Ụgbọ oloko si Brighton ojii na Cardiff Central nwere ike na-agba ọsọ site banyere anọ anọ na-na-a-ọkara awa, na n'ebe ọ bụla si onye atọ mgbanwe. The ụgbọ oloko na nke a ụzọ na-agba ọsọ ọzọ ma ọ bụ na-erughị ụbọchị nile.
Cardiff na Liverpool
na Cardiff, ị ga-ahụ ụzọ Cardiff City na Cardiff City Stadium, nke a pụtara na-akpachi anya ebe mgbakọ nke a n'ogo. Ma ọ bụrụ na ị na-eme oge gị njem ahụ a ịma aka nha megide Swansea City, ị ga-abụ na nke a n'ezie na-emeso. Nke a ga-abụrịrị a pụtara ngwa ngwa nkwụsị Otú ọ dị na-aga na ibu football obodo n'ime ime ebe ugwu. The atọ- anọ-hour ụgbọ okporo ígwè si Cardiff Central ka Liverpool Wayo Street bụ m nkwanye. Ọ bụ a pụtara mgbe nile n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ, a na nanị otu ma ọ bụ mgbanwe abụọ, na-ewe gị kpọmkwem n'ime obi nke English football. Ọ bụghị banyere ụgbọ okporo ígwè ahụ na-ewe gị ziri ezi tinyere Cotswolds, a ọmarịcha eke ebe ahụ bụ a njegharị mma na nke ya onwe.
Liverpool na Newcastle
na Liverpool, ị pụrụ iji na-ewepụta ụfọdụ oge inyocha, dị ka ọ bụ n'ezie ezigbo ebube obodo. Ma football bụ ka isi mma. Anfield, ebe Liverpool na-arụ, na-maara na-n'etiti ndị kasị mma Premier League stadiums, na ọtụtụ ndị kweere nke a pụrụ ịbụ afọ maka otu nwetaghachị Premier League ebube ma weghara a egwuregwu. Nke ahụ bụ nnọọ na-ekwu na ama egwuregwu, ama mara maka ya ume, ga-buzzing maka n'afọ ọzọ ma ọ bụ otú, na pụrụ ime ka ndị kasị mma football ahụmahụ niile nke UK.
site na nke a ebe, e nwere a ole na ole nhọrọ. Ọ bụrụ na gị oge dị mkpirikpi, ọ ga-akacha mma iji na-nnọọ obere njem Manchester tupu n'isi azụ London. Ọ bụrụ na e nwere bụ oge, Otú ọ dị, M akwado aga gara aga Manchester na n'ebe ugwu, na ihe kwesịrị a Olee ihe enyemaka a atọ-hour ride si Liverpool Wayo Street ka Newcastle. Ị nwere ike nweta a kpọmkwem ride, na mgbe a anya dị ka ndị fọdụrụ n'ezinụlọ gbatia nke a dum ndepụta na map, ọ bụ n'ezie bụghị a ọjọọ njem.
St. James 'Park na Newcastle nwere ike kacha ámá egwuregwu dị na otu, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-apụghị nnọọ dakọtara akụkọ ihe mere eme nke a ebe dị ka Anfield. Ọ bụ a mara mma, otu bịara, na otu ebe e nwere ike ịbụ nnọọ a bit nke ahuhu. N'ezie, n'ihu a na-adịbeghị anya otu opener, ọ tụrụ aro Newcastle nwere ike iwe iwe Tottenham Hotspur n'ihi na nke ọhụrụ-oge uzu na Tyneside na ahuhu na kweere na-esi ìgwè mmadụ a. Na-ewe iwe ka ọ na-, ma nke a bụ ka ihe egwu ebe na-ekiri egwuregwu maka otu ihe mere e zoro aka na. Na-eme ka ọ a nnọọ kwesịrị gburugburu.
Mgbe a ngwa ngwa egwuregwu ke Newcastle, i nwere ike banye ụgbọ okporo ígwè azụ Manchester, ikekwe on otu ụbọchị ma ọ bụrụ na usoro ihe omume na-arụ ọrụ si. Newcastle Central Station na Manchester Victoria kwesịrị a abụọ na-a-ọkara hour njem na-enweghị ihe karịrị otu mgbanwe.
Manchester na London
E nwere ọtụtụ nhọrọ Manchester, dị ka abụọ nke otu a kasị mara amara na ìgwè – Manchester City na Manchester United – na-akpọ obodo home. Ọ bụrụ na ị na-na na karịsịa n'ime football na ị na-adịghị eji ya dị ka a ga-esi a mma njegasi, ị kwesịrị ị na-agbalị enwetaghị ma ìgwè n'otu laa, ma ọ bụrụ na oge na-enye ohere. Ma ọ bụghị ya, i nwere ike dị ka nke ọma tụgharịa a na mkpụrụ ego. Man Utd. Si Old Trafford bụ a akụkọ ihe mere eme ámá egwuregwu na onye na-echeghị na Fans; Man City Etihad Stadium ọzọ bụ ala-nke-na-art, na City siworo mma otu nke mbubreyo.
Ozugbo ị na-mere na Manchester ọ bụ a ezigbo, abụọ na-a-ọkara ma ọ bụ atọ-hour ụgbọ okporo ígwè azụ London si Manchester Victoria ma ọ bụ Manchester Piccadilly. N'oge ahụ, na njem bụ a Kechie! Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji gị fọdụrụ oge na London na-ahụ otu n'ime klọb unu hụrụ na mmalite nke njem. dị ka e kwuru, e nwere ọtụtụ ndị ezi nhọrọ.
Ị dị njikere inyocha Train njem na-enwe ụfọdụ bọl? nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko tiketi bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#football #bọl Train Travel traveltips